Torolàlana momba ny fametrahana MediaLight Mk2 - Jiro MediaLight Bias
Voamarina ny ISF
Marina ny haino aman-jery
Bolam-pahazavana MediaLight Mk2
Jiro birao mety tsara-Lume Pro
Fitaovana DIY MediaLight
Jiro bias LX1
Inona no mahasamihafa ny MediaLight & LX1?
MediaLight Pro 20 "Fanamafisana henjana
Toro-marika Spears & Munsil HD
Amin'ny karazana fampisehoana
Ho an'ny Solosaina
LX1 Bias Lighting 1 metatra Strip
Ho an'ny fahitalavitra
MediaLight Mk2 Flex (2-6 metatra)
Jiro bias LX1 (2-6 metatra)
Fa maninona no MediaLight?
Ny Warranty 5-taona MediaLight
Fiverenana sy fifanakalozana 45 andro
Ianaro ny jiro fanavakavahana
Inona ny fahitalavitra ary manara-maso ny jiro mirona?
Maninona raha mivarotra amin'ny Amazon?
Ny halavany aiza no tokony ho azoko amin'ny fahitalavitra ahy?
Mampitaha ny LX1 amin'ny MediaLight Mk2
Fahatakarana ny lanjan'i minimis
Vidio avy amin'ny Flanders Scientific
Lisitry ny mpivarotra
Olana manjavozavo sy lavitra
Olana Sony Bravia
Vizio TV sy Soundbar Remote Control Cross Talk
Ny LG TV-ko dia misy seranana USB 2.0 fotsiny
Fametrahana sy fanitsiana
Fametrahana jiro MediaLight Mk2 Bias
Fametrahana jiro LX1 Bias
Mahita ny haavon'ny famirapiratana tsara indrindra
Torolàlana momba ny fametrahana MediaLight Mk2
Mametraha dimmer iray isaky ny MediaLight na LX1. Raha manisy dimmer Wi-Fi amin'ny Mk2 Flex ianao dia aza ampiasaina ihany koa ny dimmer hafa izay niaraka tamin'ny Mk2 Flex. Tsy hiasa tsara izy ireo raha tsy esorina ny iray.
Mba malemy paika azafady.
Ireo kofehy varahina madinidinika ao amin'ny MediaLight Mk2 anao dia mpamatsy hafanana sy herinaratra tena tsara, nefa malefaka be koa izy ireo ary mora rovitra.
Azafady mba avelao ny zoro ho malalaka kely ary aza tsindriana. Mety hifikitra kely aza ny zorony. Ara-dalàna izany ary tsy atahorana hihataka. Tsy hiteraka aloka izany. Ny famerana ny zoro dia mety hahatonga azy ireo ho triatra.
Raha miraikitra amin'ny fahitalavitra ny MediaLight anao, dia misy vintana mety hirona tokoa raha manandrana manala azy ianao. Ny lakaoly dia mamorona fatorana avo be. Voasaron'ny fiantohana izany.
⚠️ Ahenao ny mety ho simba amin'ny MediaLight vaovao anao. *
Azafady mba vakio ity torolàlana fametrahana ity ary jereo ity horonan-tsary fohy fametrahana ity mandritra ny taona maro nifaliana.
* Mazava ho azy, raha tapaka ny MediaLight anao mandritra ny fametrahana azy dia rakotra ao anatin'ny Warranty 5-taona MediaLight ianao.
The faribolana mena ao amin'ny sary etsy ambony dia asehoy ireo POINTS FLEX izay ahafahanao manenjana ny tsipika 90 ° amin'ny lafiny roa. Na ny teboka mihetsiketsika dia afaka miondrika amin'ny lafiny roa. Tsy ilaina ny mametaka ny zoro eo ambany. (Miankina amin'ny habetsaky ny hery ampiasaina hanerena ny zorony, azonao atao ny mamiravira ny volo PCB varahina).
Raha mila mihodina mihoatra ny 90 ° ianao dia tokony alaminao ny teboka mihodina maromaro. Raha atao teny hafa, ny fihodinana 180 ° dia tokony zaraina eo anelanelan'ny fihodinan'ny 90 ° roa.
Tsy ilaina ny manosotra ny zorony rehefa mihodina ny zoro iray ianao, fa raha tsy mahazaka ny faniriana ianao dia aza manery mafy loatra.
Ok, miaraka amin'izay tsy an-dàlana, azafady mba jereo ny horonantsary fametrahana anay!
Manana olana amin'ny fanaraha-maso lavitra anao? Aza hadino ny mijery an'ity horonan-tsary vita haingana ity mba hampisehoana aminao ny fomba hiantohana ny tsipika misy ny tranonkala.
Antsipiriany nitpicky fanampiny:
Raha be loatra aminao ny fampahalalana, aza misalasala mandingana azy io, fa raha manontany tena ianao hoe maninona izahay no nanapa-kevitra momba ny famolavolana sasany, mety ho hitanao eto ambany ilay fampahalalana.
Ny MediaLight Mk2 dia toa tsy mitovy amin'ny maodely taloha. Namboarina tanteraka izy io. Alohan'ny hidirantsika amin'ny fametrahana dia tiako ny mamaritra ireo fanovana ary manazava ny antony nanaovanay azy ireo.
Voalohany, ho hitanao fa mampiasa lamina zigzag ilay tsipika. Natao izany satria, raha tokony ho ireo tarika taloha izay niantehitra tamin'ny tsipika maromaro nifandray tamin'ilay mpampisaraka 4-way dia namboarinay ho toy ny singa tokana manodidina ny 3 na 4 ny lafiny, na amin'ny in-U nivadika ambadiky ny fampisehoana.
Tsy toy ny MediaLight Flex taloha, tsy misy fitaka ny mihodina. Ny tsipika dia hitodika mora foana zorony, aza hadino ny tsy manapatapaka ireo singa marefo amin'ilay tsipika. Miondrika fotsiny raha misy FLEX POINT misy marika amin'ny logo MediaLight "M" na "DC5V".
1) Ny tarehimarika Mk2 dia tsy misy afa-tsy tady fanitarana .5m (antsasaka metatra). Fohy ihany izany, sa tsy izany? Nataontsika mahihitra izany - fa TSY vola.
Mahihitra isika HERINATRATRA mba hahafahantsika mihazakazaka lava kokoa miaraka amin'ny fihenan'ny herinaratra noho ny maodely teo aloha. Nozaraina ho 4 strips ny quad strip taloha mba hanaparitahana bebe kokoa ny filatsahan'ny voltre eo amin'ireo 4 strips, saingy izany dia niteraka ny famirapiratana farany ambany sy ny akanin-voalavo iray an'ny tariby. Ny Mk2 dia voarindra ho an'ny fametrahana madio kokoa sy mora kokoa.
Mampiasa tariby varahina madio izahay mba hampihenana ny fanoherana ny tadiny, fa satria ny Mk2 Flex dia natao hialana amin'ny herin'ny USB 5v, ny fampihenana ny halavan'ny tariby dia mampitombo ny famirapiratan'ny volo hatramin'ny 15% eo ho eo. Miaraka amin'ny tadin'ny fanitarana, ny dimmer ary ny switch, ianao mbola manana tariby total 4 metatra. Raha tsy misy ny fanitarana .1.2, 5 metatra ny halavan'ny tariby, anisan'izany ny switch sy dimmer. Raha mila mihazakazaka lavitra ianao amin'ny herinao, ny fomba tsara kokoa anaovana azy dia amin'ny alàlan'ny tadiny 2.4v na 110v (miankina amin'ny faritra misy anao).
Aza adino ve ny antony tsy mihoatra ny 5m ny tariby famandrihana USB (matetika, fohy kokoa izy ireo, tsy mihoatra ny 10 metatra / 3m). Izy io dia satria tsy afaka mihazakazaka lavitra ny herinao USB tsy misy fidinan'ny herinaratra noho ny fanoherana. Ny orinasan-kery dia tsy mandeha tariby 110v amin'ny tranonao koa. Mila tariby mandeha amin'ny herinaratra avo ianao hahazoana herinaratra avy amin'ny toby famokarana herinaratra mankany an-tranonao.
Toy izany koa no mihatra amin'ny MediaLight Mk2 anao.
Raha 20 metatra ny elanelan'ny rindrinao dia afaka mihazakazaka tady fanitarana 110v na 220v ianao nefa tsy very ny herinaratra ho an'ny jiro sy ny fahitalavitra. Raha tsy izany dia tsara kokoa ny mandeha amin'ny herinaratra mivantana avy amin'ny fahitalavitra na amin'ny tariby mandeha akaiky eo akaiky eo. Ny Eclipse dia mbola misy fanitarana 4ft, satria fohy ny Eclipse ka zara raha mahazo hery (ambanin'ny 300mA, raha manontany tena ianao).
Ireo chips Mk2 vaovao dia tena mahomby (mahatonga ny tadiny 5v mety hihoatra kokoa), saingy mila mampihena ny fanoherana eo amin'ny plug USB sy ny tsipika hahatratra ireo halavany ireo isika.
Raha mila LED manjelanjelatra ianao dia manolotra safidy 12v sy 24v (sy jiro 800 lumen), fa ny jiro mitifitra avy amin'ny fahitalavitra dia momba ny fahafaha-manao, tsy dia mandeha ny tariby ary (amin'ny tranga sasany / ankamaroan'ny) mampirehitra sy mamono ny jiro. miaraka amin'ny fahitalavitra. (Tsy dia nanao an'ity farany ity i Sony Bravia. Vonoina nefa tsy fantany ny fomba hijanonana ary hivadika ho toy ny adala rehefa maty ny TV). Nanolotra soso-kevitra 12v nandritra ny taona maro izahay, saingy tsy mila na mila jiro bias ianao hamirapiratra tokoa. Izany no antony ampidirantsika dimmer. Na dia misy herinaratra USB 5v aza, dia mazava loatra ny jiro nefa tsy mampiasa dimmer. Ny toerana misy ny herinaratra ambony kokoa dia rehefa te hampiasa tady ianao mba hanazavana jiro lava kokoa manodidina ny efitrano.
2) Ny volafotsy vaovao dia toa volafotsy, tsy toy ny varahina izy ireo, fa varahina tototry ny firaka.
Ny tadin'ny PCB rehetra dia varahina madio, fa kosa mba hampitomboana ny androm-piainan'ilay tsipika, mba hisorohana ny fitrandrahana ary hanatsarana ny kalitaon'ny fifandraisana eo anelanelan'ny LED sy ny fantsom-pirinty ao amin'ny PCB, mifono alimo anaty rano izy ireo.
Toy izao ny endrik'izy ireo alohan'ny handentehana azy ireo sy hanapahana azy ireo ary alohan'ny hametahana ny LED sy ny resistors:
Ity dingana manaraka RoHS ity dia mitafy ny varahina amin'ny alika misy zinc, nikela ary tin. Tsy olana ny famonoana ity fonosana ity fa ny sosona eo anelanelan'ny LED sy ny tsipika (eo ambanin'ny LED izay tsy ahitanao azy) no tena zava-dehibe.
Misy tombony fanampiny amin'ny fanitrihana firaka. Izy io dia loko tsy mitongilana kokoa noho ny varahina miharihary. Na izany aza tsy handainga aho. Ny fahasamihafana dia tsy azo tsinontsinoavina. Tsy manova ny maripanan'ny loko mifangaro izany - 20K eo ho eo. Ny fampiasana PCB mainty dia misy fiantraikany lehibe kokoa amin'ny mari-pana amin'ny loko farany. Notsapainay ny kofehy fotsy izay niteraka fiovana hatramin'ny 200K.
Misy fiovana hafa koa.
Nifindra avy tao amin'ireo poti isika tamin'ny maodely MediaLight Single Strip, Flex ary Quad teo aloha ho any amin'ny chip Colorgrade Mk2 mahazatra (SMD 2835 miaraka amin'ny fangaro fosfor fanao). Ny CRI dia nakarina avy amin'ny 95 Ra ka hatramin'ny Ra 98 Ra. Ny TLCI dia nitombo tamin'ny 95 ka hatramin'ny 99. Jiro mazava tsara izy io.
Izahay dia niasa tamin'ity puce ity hatrizay namoahana ny MediaLight Pro ary ny puce dia manome ny MediaLight Pro-level spectral tsy miova ary ny CRI / TLCI avo indrindra amin'ny vidiny isan-metatra ambany noho ny anay MediaLight kinova 1.
OK, ampy ny manazava ny endrika (amin'izao fotoana izao). Te hahafantatra ny fametrahana an'io zavatra io ianao.
Inona no ao anaty boaty (ho an'ny Mk2 Flex 2m-6m)
1) Switch toggle on / off miaraka amin'ny plug lahy USB
2) Tsela hazavana MediaLight Mk2 Flex
3) Dimmer miaraka amin'ny mpandray infrared (tsy hiasa ny lavitra raha tsy mampifandray ny dimmer)
4) Fanaraha-maso lavitra
5) .5m kofehy fanitarana. Ampiasao ihany raha mila izany ianao. Raha mandeha amin'ny port USB an'ny fahitalavitra ianao dia mety tsy mila an'io ary tsy hampiasa herinaratra kely kokoa raha esorinao izany.
6) Adapter AC ankatoavina (Amerika Avaratra ihany).
7) Sarimihetsika mandeha amin'ny tariby. Ampiasao ireo mba hanadio ny tariby sy / na hanampy amin'ny fametrahana ny IR mpandray ny dimmer. Ny singa MediaLight Mk2 lehibe kokoa dia misy clip maro kokoa.
Rehefa mametraka ny MediaLight Mk2 vaovao amin'ny fampiratiana anao, raha manodidina ny 3 na 4 ianao ohatra, rehefa eo amin'ny rindrina ny fampisehoana anao:
1) refesina 2 santimetatra avy eo amin'ny sisin'ny fampirantiana (raha tsy manana mpitondra mora ampiasaina ianao, dia mijorika kely ny marika "MediaLight" amin'ny lafiny rehetra amin'ny boaty Mk2 Flex- tsy tafiditra ao ny "M" mena, maitso ary manga "M" mihoatra ny 2 santimetatra ny lavany). Ny boaty koa dia somary latsaky ny 2 santimetatra ny hateviny (manodidina ny 1 3/4 santimetatra).
2) Manomboha miakatra amin'ny ilan'ny fampisehoana eo amin'ny lafiny akaiky ny seranana USB, manomboka amin'ny POWER (plug) FARANY amin'ny tsipika. Raha miditra amin'ny port USB an'ny TV ianao dia mety tsy mila mampiasa ny extension .5m izay nampidirinay. Avelao izy (raha azonao atao) ho an'ny fametrahana tsara kokoa.
Ho mora kokoa ny manapaka ny halavany be loatra rehefa vita ianao. Raha tsy manana seranan-tsambo USB ny fampirantianao dia manomboka miakatra ny fampisehoana amin'ny lafiny akaiky ny loharanon-kery, na tariby herinaratra na boaty ivelany araka ny hita amin'ny fampisehoana sasany. Raha eo afovoany mivantana io dia tsy haiko izay holazaiko aminao. Atsimbadika ny farantsakely iray. :)
Raha ny tokony ho izy, raha sendra manapaka ny faran'ny herinaratra ianao, dia halefanay maimaimpoana ho anao ny mpisolo toerana, fa angamba hihomehy tsara izahay. Toa mitranga matetika izany amin'ny olona tena mahay any amin'ny andrim-panjakana masina, noho izany dia heverinay ho mariky ny faharanitan-tsaina izaitsizy izany, saingy miseho im-betsaka isan-taona izany ary mbola ihomehezana ihany isika.
Ny jironao dia voasaron'ny fiantohana eo amin'ny indostria mandritra ny 5 taona ary manarona fametrahana tsy feno izahay, koa aza dia manantitrantitra loatra. Raha manao korontana amin'ny MediaLight Mk2 ianao dia mifandraisa aminay.
3) Raha mila manapaka ny halavany lava ianao, dia azonao atao ny manapaka azy amin'ny tsipika fotsy izay mamaky ny fifandraisana rehetra. Hetezo amin'ny tsipika etsy ambany:
Izany dia tokony handrakotra ny zava-drehetra ho an'ny ankamaroan'ny fametrahana rindrina.
Ity torolàlana "inverted-U" manaraka ity dia mihatra rehefa mampiasa tsipika 2m (na latsaka) amin'ny fampisehoana eo amin'ny laharana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa tsy manandrana mandeha manodidina ny 3 sisiny ianao:
Ity toro-lalana ity dia miasa raha toa ka manafatra ny habeny marina ianao amin'ny fampisehoana avy amin'ny tabilao habe anay.
Ity misy horonantsary vonjimaika nataoko rehefa nianjera tamin'ny hotely aho nandritra ny delestazy nifandraika tamin'ny rivo-doza (mandeha matetika miaraka amin'ny jiro fitongilanana;)). Hosoloinay amin'ny volana septambra izany amin'ny zavatra maharitra, saingy fohy sy mamy. Amin'ity tranga ity, dia tsipika 1m amin'ny fisehoana 42 santimetatra, saingy mety amin'ny tsipika 2m na 3m amin'ny fisehoana lehibe kokoa io.
Ahoana no fomba hametrahako MediaLight Mk2 rehefa mijoro ny seho?
1) Tadiavo ny afovoan'ny tsipika amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fiandohan'ny tsipika eo akaikin'ny faran'ny tsipika ary mahita ny afovoany. Azonao atao koa ny manisa LED. Misy LED 30 isaky ny metatra. Raha 2 metatra ny halavany, ny fifandraisana eo anelanelan'ny LED faha-30 sy faha-31 no afovoany.
2) Tadiavo ny afovoan'ny fahitalavitra ao ambadiky ny fampirantiana. Azonao atao ny manisy marika ny afovoany amin'ny sombin-kazo masking na manisy marika azy amin'ny tsaoka na koa, moramora, amin'ny famafana pensilihazo. ohatra manodidina ny 1/3 amin'ny lalana avy eo an-tampon'ny fampiratiana. Tsy voatery ho marina izany! Ity "1/3 an'ny lalana midina midina" ihany mihatra rehefa mampiasa tsipika izay fohy kokoa noho ny lafiny 3 amin'ny fampisehoana!
Raha manana 3m amin'ny fampisehoana 65 "ianao dia araho ny torolàlana mahazatra an'ny 2" manomboka amin'ny sisin'ny fisehoana amin'ny lafiny rehetra.
Fanamarihana: Raha miolaka ny sisin'ny fisehoanao dia tsara raha apetraka somary lavitra ny jiro avy eo amin'ny sisiny - na ny toerana misy ny tontalin'ilay fampiratiana dia mifanitsy amin'ny rindrina, na lavitra ny sisiny mba hisorohana ny fahitana mivantana. miaraka amin'ireo LED avy amin'ny toerana ahitanao azy.
3) Atombohy amin'ny fametahana ny afovoan'ny tsipika eo afovoan'ny fampirantiana ary mankanesa any amin'ny sisin'ny fampiratiana. Mety hanampy amin'ny fanapahana ny lamosina plastika mena eo afovoany io. Azonao atao izany amin'ny fisintonana azy moramora hiala ilay tsipika.
Rehefa mampiasa ny inverted-U, 1/2 amin'ny totalin'ny LED amin'ny tsipika dia tokony hahitana ny ampahany atsivalana 1/3 avy any ambony. Noho izany, raha strip 2m dia tokony ho 30 LED eo ho eo (1 metatra) eo ho eo ny ampahany marindrano. Tokony hisy ny sisa LED ~ 15 hidina amin'ny lafiny tsirairay. Raha sakan'ny 3 metatra dia tokony hisy LED LED marindrano 46 sy LED 22 eo amin'ny lafiny tsirairay.
Ho an'ny fahitalavitra amina fijoroana dia apetraka amin'ny marika 1/3 matetika ny jiro bias satria tsy tena tianao ny hanazava ny fantsom-pahitalavitra, na mpandefa fantsona afovoany na bara faneno, na tzotchkes hafa mety hipetraka eo amin'ny console amin'ny fahitalavitra. .
Raha manana faritra tsy mitovy eo an-damosina ny seho ataonao (izany hoe "humps" LG na Panasonic OLED) dia tsara kokoa ny mamela elanelana amin'ny rivotra sy hamelatra ireo elanelana ireo miaraka amin'ny zoro 45 ° toy izay hanaraka ny volon'ilay fampiratiana. (Fantatro fa toa an'olona 12 taona no nanao an'io fanoharana io).
Raha manaraka ny fizotran'ny henjana kokoa ianao, izay mifanatrika lavitra ny tara-pahazavana LED, azonao atao ny miafara amin'ny "fanning" na fijerena scalloped an'ireo toerana ireo. Tsy misy fiatraikany amin'ny fahombiazana izany, fa ny halo kosa dia tsy hiseho milamina toy ny mety. Izy io koa dia mitazona ny halo ho tsara sy tsy miova amin'ny rindrin'ny flush. Raha lavitra ny rindrina ianao dia tsy dia fahita firy ny fanning.
Raha mamaky an'ity ianao ary very hevitra tanteraka, aza matahotra. Mifandraisa amiko amin'ny alàlan'ny chat (zana ambany eto amin'ity pejy ity). Hanampy sary sy horonan-tsary bebe kokoa aho amin'ny andro ho avy. Hatsanganay amin'ny haino aman-jery MediaLight Mk2 vetivety izahay.
Ny vahaolana tsara indrindra momba ny bias